Mpanamboatra fandriana telo miasa | Plastika fiasa telo Foldable, mpanamboatra
Torolàlana ho an'ny hopitaly fitsaboana hopitaly mora vidy A03-3
Abs telo crank telo miasa hopitaly fandriana A02-1
Ny fandriana hopitaly miisa telo dia manana lamosina, fialan-tsasatra amin'ny tongotra ary fanitsiana ny haavony. Mandritra ny fitsaboana isan'andro sy ny fitaizana be antitra, ny toerana misy ny lamosin'ny tongony sy ny tongotr'ilay marary dia ahitsy araka ny filan'ny marary sy ny filàn'ny mpitsabo, izay manampy amin'ny fanalefahana ny tsindry amin'ny lamosina sy ny tongotra ary hampiroborobo ny fizotry ny rà. Ary ny haavon'ny haavon'ny fandriana mankany amin'ny gorodona dia azo ovaina amin'ny 420mm ~ 680mm. Ny cranks ABS dia azo aforitra ary afenina mba tsy ho maratra ny mpitsabo mpanampy sy ny mpitsidika.
Toeram-pitsaboana hopitaly miisa telo miaraka amina seranam-piaramanidina ABS A02